Ku xigeenka hoggaamiyaha xisbiga DF ee Denmark oo lagu xukumay lix bilood oo xabsi ah
HomeWararka DenmarkKu xigeenka hoggaamiyaha xisbiga DF ee Denmark oo lagu xukumay lix bilood oo xabsi ah
August 13, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
Photo: Philip Davali / Ritzau Scanpix / NTB
Morten Messerschmidt oo ah kuxigeenka xisbiga DF (DF) ayaa lagu xukumay lix bilood oo Xabsi ah kadib markii lagu helay khiyaano iyo been abuur la xiriira lacagaha EU-da.
Messerschmidt ayaa isla markiiba ku dhawaaqay inuu racfaan ka qaadanayo xukunka. Messerschmidt ayaa lagu soo oogay khiyaamo lacageed oo Midowga Yurub ah iyo been abuur, iyo waxyaabo kale, oo la xiriira heshiis been abuur ah oo lala galay Color Hotel Skagen.
Sida ku cad dacwadda, Messerschmidt ayaa si sharci darro ah uga heshay Midowga Yurub ku dhawaad ​​100,000 NOK sannadihii 2014 iyo 2015 si ay u daboosho kharashaadka shirarka Midowga Yurub ee aan weligood dhicin.
Hay’adda dacwad oogayaasha ayaa rumaysan in ay bixisay caddaymo muujinaya in lacagtaas, dhinaca kale, ay ku baxday daboolidda kharashaadka la xiriira shirarka kooxeed ee xisbiga dadwaynaha deenishka DF.